घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » होटल र रिसोर्ट समाचारहरू » के होटेलहरुमा दैनिक हाउसकीपिंग साँच्चै मरेको छ?
ब्रेकिंग यात्रा समाचार • व्यापार यात्रा • स्वास्थ्य समाचार • अतिथि सत्कार उद्योग • होटल र रिसोर्टहरू • समाचार • मान्छे • पुनर्निर्माण • जिम्मेवार • सुरक्षा • पर्यटन • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज
उद्योग विश्लेषण हामीले देखेका छौं संकेत गर्दछ कि हाउसकीपिंग परिवर्तनहरु लाई 100 देखि 200 आधार बिन्दु बचत को लागी नेतृत्व गर्न सक्छ र यसले होटल को प्रदर्शन लाई असर गर्दछ। जे होस्, श्रमको अभाव र अतिरिक्त प्रशिक्षण घरको कामदारहरुलाई अब यो समय को लागी सबै कोठा सफा नगरीकन उत्पादकत्व दर उच्च हुन बाट रोक्दैछ।
धेरै होटलहरु महामारी को समयमा सेवाहरु कटौती गर्न बाध्य भए।
दैनिक हाउसकीपिंग को निलम्बन धेरै होटलहरु को लागी एक विकल्प थियो।
हिल्टन घर को रखरखाव मा एक औपचारिक रुख संग बाहिर आउन पहिलो को एक थियो।
होटेलहरु २०२० मा सीधा रहन संघर्ष गरे: बस तोड्नु एक स्मारकीय उपलब्धि मानिन्छ। आदेश मा त्यसो गर्न को लागी, धेरै होटलहरु unenviable संग बाध्य थिए - यद्यपि आवश्यक छ - सेवाहरु काट्न को लागी जहाँ उनीहरु गर्न सक्थे।
सबैभन्दा उल्लेखनीय को एक थियो र धेरै होटलहरुमा दैनिक हाउसकीपिंग को निलम्बन जारी छ। सेवा, एक पटक पाहुनाहरु द्वारा प्रदान को लागी लिईयो, एक अनुरोध मा वितरण योग्य भयो र सामान्यतया एक चेक-इन पछि धेरै दिन सम्म प्रस्ताव गरीएको छैन।
हिल्टन घरको रखरखाव मा एक औपचारिक रुख संग बाहिर आउनुहुने पहिलो मध्ये एक थियो, तर धेरैजसो ब्रान्ड, या त सार्वजनिक डोमेन मा यसो भन्दै वा ग्राहकहरु लाई चेक इन गर्दा उनीहरुलाई सूचित गरीयो। यो उपाय जाहिरा तौर पर पाहुनाहरु र स्टाफ को सीमित गर्न को लागी एक रणनीति थियो COVID को जोखिम को बिरुद्ध। -१,, तर यो, पनि, एक पैसा बचतकर्ता मानीएको थियो, घरकीपर घण्टा सीमित।
कोहि भन्छन कि अनुरोध मा घरको रखरखाव को लागी एक सेवाहरु र सुविधाहरु को एक झरना हुन सक्छ जसमा एयरबलाइन्स कसरी संचालन को लागी एक कैस्केड हुन सक्छ, जहाँ एक लागत बिभिन्न चीजहरु संग जोडिएको छ कि मानार्थ को लागी प्रयोग गरीन्छ।
के पारी तल रेखा मा वास्तविक प्रभाव छ - पैसा बचत र मुनाफा बढाउने? के यो जारी रहन्छ जब कब्जा बढ्छ? पाहुनाहरुलाई के लाग्छ?
होटल उद्योग को सबै भन्दा पहलुहरु जस्तै, मुद्दा एक भन्दा पहिलो नजर मा सोच्न सक्छ भन्दा जटिल छ।